दु’खद खबर : २० बर्षको क’लिलो उमेरमा यी ब’हिनेले सं’सार बाट बिदा हुनुपर्यो.. – Sidha Post 24
लाउलाउ खाउखाउ भन्ने २० बर्षको कलिलो उमेरमा यी नानिको को ज्या’न गएको छ । छोटो समयमा सानो मन गराएर तिम्रो यो गलत निर्णयले गर्दा घरपरिवार लगायत सम्पुर्ण आफन्तजन हरुलाइ सोकसन्तप्त बनाएको छ! उनका दाजुको सामाजिक सन्जालमा भाबुक शोक बेदना” ”
तिमिसङ्ग हाम्रो एउटामात्र गुनासो रहयोकि हाम्रो शब्दहरुले तिम्रो पिडालाई कम गर्न सकेन दुख सङ्ग हार खएउ! छोतो समयमा सानो मन गराएर तिम्रो यो गलत निर्णयले गर्दा घरपरिवार लगायत सम्पुर्ण आफन्तजन हरुलाइ सोकसन्तप्त बनएको छ!जो गरेउ आफ्नो एक्लो खुशी को लागि सम्पुर्ण लाई दुखी बनएर गएउ !
तिम्रो आत्माले शान्ति पओस तिम्रो स्वर्ग मा बास होस बहिनी हर्दिक श्रद्धाञ्जली ? जन्म २०५७-५-१२ / मिर्तु २०७७-५-२४